WARBIXIN:- Isbadel dhinaca amniga oo laga dareemayo guud ahaan degmooyinka Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
WARBIXIN:- Isbadel dhinaca amniga oo laga dareemayo guud ahaan degmooyinka Muqdisho
Tan iyo markii xilka taliyaha nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed loo magacaabay Jeneraal C/laahi Gaafow Maxamuud ayaa waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya laga dareemay isbadel aan caadi ahayn oo dhinaca amniga ah.
Hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa dhowr jeer hore fashilisay qaraxyo lala damacsanaa in lagu dhameeyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Muqdisho.
Goobaha ay inta badan Al-shabaab qaraxyadda la eegato ayaa waxaa ka mid ah meelaha ay dadka shacabka ah ku badan yihiin, sida maqaayaddaha, xarumaha dowladda iyo sidoo kale goobo kale.
Ciidanka nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa bilihii u dambeeyay si is-daba joog ah u fashilyay gaadiid badan oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay, kuwaas oo la doonayay in lagu haligo shacabka Soomaaliyeed.
Ciidanka NISA ayaa markii ay qabtaan gawaaridaas walxaha qarxa ka buuxa, waxay si deganaan ah u kala fur-furaan qaraxyadda iyadoo aanay wax qasaare ah ka dhalan, waxaana arrinkaasi la oran karaa waa mid ay hay’adda nabad-sugidda uga soo baxday howsheedda.
Ugu dambeyntii, Jeneraal C/laahi Gaafow Maxamuud ayaa la oran karaa inuu yahay shaqsi waxtar weyn lasoo baxay, islamarkaana shaqadiisa u gudanaaya intii ay awoodiisu gaarsiisan tahay, waxaana Jeneraal Gaafow lagu tilmaami karaa mid kun-jeer ka wanaagsan islamarkaana ka daacadsan taliyeyaashii hore ee soo maray hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA.